DAAWO: Madaxweynaha Puntland oo kuwajahan Garacad, safarkiisii koowaad & Ujeedada socdaalkiisa.
GARACAD(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa isku diyaarinaya safarkiisii koowaad tan iyo markii uu xilkaas qabtay oo uu ku tagayo degmada Garacad oo uu kasocdo Mashruuca Maalgashigii Qarniga ee ay dad Soomaaliyeed ku dhisanayaan deked caalami ah oo noqonaysa mida ugu weyn Soomaaliya.
Siciid Deni ayaa hogaamin doona ajaaniib u badan ganacsato u dhalatay dalalka Carabta, Afrikada dhexe iyo Shiinaha, kuwaas oo soo arki doona dhismaha dekeddan cusub oo si rasmi ah 20-ka bishan loo bilaabi doono in badda la duugo.
Mashruucan waa arrin aan sahlaneyn, laakiin waxgaradka, Ganacsatada iyo qeybaha bulshada gobalka Mudug ayaa markii koowaad hindisay waana arrin muhiim weyn ugu fadhida gobalka Geeska Afrika oo dhan.
HALKAAN KA DAAWO GARACAD
Madaxweynaha Puntland ayaa si rasmi ah goobjoog u noqon doonaa talaabadii ugu horeysay oo loo qaadayo xagga Badda oo ah meesha ugu muhiimsam ee dekedda laga soo dhisayo, waana arrin ay dad badan bogaadiyeen.
Madaxda gacanta ku haya dhismaha Dekeddan ayaa shalay u sheegay maalgashadayaal iskugu tagay magaalada Garoowe kulan ka socda in ay diyaar u yihiin in ay saamiyo bixiyaan oo ay iibiyaan, waxayna sheegeen in ay maalgashigan ka dhigan yahay mid faa`iido badan laga heli doono, marka dhismaha la dhameeyo taasina waa arrin kale.
Dhismaha Garacad, dad badan ayaa u arka mid aan suuragal si fudud ku noqon karin xili dekeda Hobyo ay dawladda Qadar balan-qaaday in ay ku bixinayso Malaayiin Dollar, haddana caqabado waa weyn ayaa haysta oo aan ku furneyn dekedan Garacad, taas oo qeyb ka tahay dhulka labada dhinac oo aad u kala duwan.